Gumii Paarlaamaa Oromoo
Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)
Oromo Parliamentarians Council (OPC)
Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!
New Page 2 home
Melese Zenawi fi Kim Il Sung President Kora Kaabaf diriqaman bo’uu qabda:-
Nu hin boonyu Melese Zenawif akkasi nu goodhee jira. Suura Keenya Iaalaa. Oromoo Rabiif jeedha Gummaa keenya Bassa ?
Uummani Ganda hunda du'ga'ii Melese akka deemu fi dirqisfamee akka bo’uu goodhama jira, ganda gandaa irratti dasi ijarani namni gore gade hin darbine ilaalcha adda qaba jedhu: FB;ETD irra
Shifraw Jarso , Alemayoo Teganuu fi Muktar Kadir Boo'iichaa Melese Zenawi Irratti Tokkoffa , Lamaffa fi Sadaffa ba'uun rekordi haaraa galmeessan jiru, Gaafii fi deebi gazexesitoota irra dhiyateef deebin isaan kenan amoo" Uummanii Oromoo isiin iaalee akka boo'uuf isiin dura dhabadha boo'aa jeedhamneetti jeedhan" jarii kun .boo'ichaan muudamudhaf akkas gadooda jiru. Haalumaa kanan Prezedentoon Naannoo hundi fi kabinne fi Minsteroon dirqamanii bo'aa kan turan, bo’uu banan garuu Ango ykn taayita amma qaban irra kan ari'aman ta’uu isaa warii Tigre itti himan jiru. Oduu wal qabatee nu ga’een Atileetin Oromoo Beekaman Qananisa Baqala akkumaa fiigicha isaa yeroo darbee boo’iicha kana irratti ilee utuu hin milka’iin hafee jira jeedhama, sababin isaa Qananisan Imiman busee bo’uuf yaali inni goodhee hin taneef, Haile G/silasee fi Derartuu Tuluu iyyani yamuu biyya ballesan argama turan. Uummatni biyya jiruu Ganda gandan ba'ee akka boo'uu ajjaajii Mana marii Federation Ethiopia irra Tigriitichii ajjaajaa hama dabarsee jira, namni TV irratti ba'ee hin boo'iin mana hidha Qalititti akka darbamuu jeedha ajjaaji darbee. oduu biyya nu qaqabee iraa.
Melesen Biyya Nu ari'uu isaan Diriqisfamnee isaa bo'uu iraa Bilisa nu goodhee jira, Melese Zenawi Minsterootaa kassee Hanga Gandatti Ethiopian hundi diirqaman akka boo'aan Afaan ya'iin Federeation Ethiopia Murtee dabarsun isaa , Melese Zenawi fi Prezdantiin Koria Kaba Kimil Sung waliin tokko ta'aan jiru; Misensoon Paarlamaa Ethiopoia duran Manchister jiran irra;
Erga inni du`ee nutii wantii goochuu qabnuu afaan kenyaa tokko ta'ee yanni keenyas walitti dhiyatee tokkos ta'uu qabna. garuu diinii uummataa kun osoo angodhuma nu kenne kan uummatin oromoo wara saba isaa jibbee garaa isaa jalaten ofii walalle sun akka nu harka hin dabarsinee yaddo natti ta'e jira. Oromoo Bilisumma isaa Labsuu qaba Yemen iraa
Melese Zenawi Akkan Baqadhetan biyya Yemen kessatti Ashawa keessatti Hafee Dubartooni Oromoo heedun guyya guyyan Loltootaa Yemenin itti xabataman itti rorosan lubun isaan dabartee kan amoo bakka buteen isaan dhabamee, ana amoo Onnee fi Kalee koo basan gurguratan ana gadii na darban, Oromoo gummaan koo yoomi batii?? Maqa Dubarti Yementi dutee erga dhufee;
Siirna Melese Zenawi Kessa Akkasi Beelan dhumaa jiraa Immani Melese Zenawif itti Boonyuu hin Qabnuu, Shifraw Jarsoo wara yeroo nu Shashamanee Keessatti dheebuun dhuminu Melese waliin Wiskin dhiqatanituu bo'aa jira Hatuu fi hatuutu wali bo'aa jira FB Shashamane irra;
Oromoon Mana hidha jiru 40,000 gaafi keenya atatama TPLF dhyeesuuf dirqamana.
Melese Zenawi Mana Hidhati nu dhisee du'ee, Seyee Abrha, Tamirati layine, fi Oganoon bayeen nu hidhan hara lubun hin jiran, ykn angoo irra ariaman biyya ba'aan jiru, yaaki keenya hin beekamuu, himata tokko malee wagga 21 mana hidha jira, Qaliti, Zeway, Shawarobit, Mekel, Gimbi, Goba, Harar kkf Mana Hidha keesati hiranfatamnee jira. Yaakii keenya Oromoo ta’uu keenya qoofa. Hidhamtoon Oromoo Heedun Nami Nu hisisee hin beeknu , sababa hidhamneef namii beekuu hin jiru, fail hin qabnu. Nabseen PM Melese Zenawi ilee akka Booqatuuf, Hidhamtoon Oromoo mana hidha hunda keessa jiran gadii lakkifamuu qabu. Jireenya Mana hidha fi seeran ala hidhamnee jireenya gadadoo keessa wagga 21 jiraneef MP Melesef dhifma goochuuf qabna. Kanaafuu utuu PM Melese hin owalamiin Mana Hidhatii banee dhifama akka jeechuu dandeenyu goochuun garumadha. Ummurii keenya gutuu mana hidhatii nu gatuun garuu Garuma miti. Ethiopia keessati ilee jibiinsa hin dagatamnee galmeesee darba.
Melese Zenawi ana Bakka bu'aa Uuumata Arsi Nagel Mana koo Balbalati akkssti Maruman koo Bakkeet hambsian Uumataa koof Matii koo irra na ajeessan Matii koo bo'iicha dorkan. Gaafasii Shifraw Jarsoo Maliif na hin bo'iin hafee?; Uummani na filatee akka dhufee na owalatuu dhorkamee reefi koo tortore ajayee bakketi. Oromoon Haraa Ganda 7, 200 ol keessati dunkana dhabamee diqisifamee Melese Zenawif bo'aa jira. Bo'iicha Melese irrat 1faa , 2Faa fi 3faa kan ba'aan Shifaraw Jarso, Alemayoo Teganuu, fi Muktari Kadir Reefi koo akka hin owalamnee wara goodhan kessa tokko. Mukthar Kadiri Yeme (Janjaroo ) irra dhalatee Oromoo akka bulchuu goochuun tuuf Oromooti Tesfayee Adanee MP Arsi Negele FB
Harargee dha kasse Hanga Finfinee fi Kenyatti Nareebani, Na guban, Na hidhani biyya na bassan Oromoo Harka koo ilaali, gummaa koo basii Tigren biyya keenya seente lubun ba'uu hin qabduu, Fb Baqata Oromoo Kenya jiru irra
Melese Zenawi Baqa Biyya banee Biyya Yementti Mucaa Dhirra wagga 3 yemen dirqisiftee gudeede itii xabatee kun yaakka Habasha fi Melese Zenawiti Baqatoota Yemen Irra
Guyya Tokkof Magaalaa Kilitu Kara Manasibu Kessatti Alaba Bilisummaa Fanfamee Ole bara 1997(2005) Ana Rasaassan Morma koo kessa rukutan na ajjessan Melese du'ee Oromoo Bilisummaa kee Labsii Isqeal Gamada FB Manasibu Mandi Irra
MP Melese Zenawi Atami Goodhen siif bo'aa lafee koo qulatuu hafee utuu ati Biliyona 20 banki biyya ala keessa keese jirtu Ani kunoo asi Shashamaneetti beelan da'uuan jira, Junedin Sadoo fi Shifraw Jarsoo Beeli Shashamanee galee hin beeku jeedhan VOA ti dubatuu. Suurii koo kun kan kee hara hin fakatuu?. Shiferaw Jarso, Alemayo Tegenu fi Muktar Kadir Boo’iicha kee irratti 1-3 ba'uun riikoordi Galmeesu isaan Dhaga'een ani ilee kommii koon himadhee dhiifama, silayuu du’een jira kana caalaa mali na goota?, gaaf tokko Mana rabiitin sii dura dhabadha .
Melese Zenawi Reefi isaa Uumani ijan arguu qaba, sabab isaa Melese Zenawi july 16, Reffi isaa biyya galee Aduwati owalamee jira , Reefa jeedhamee kan Hagayya gafaa 27 awwalamuuf deemuu muka ykn dhagadha waan jeedhameef Namoon Reefaa Malese utuu hin tanee dhagga irrati boo'aa akka jiran keessa beektiin dhamani jiru. TPLF Propaganda hojeechuuf dirmaa hojeete dirqisisa uumataa boosisa jira. TPLF uumataa Ethiopia tufachuu irra darbee akka sawwati goowomsee oli gadii ofaa jira. Kun saba sun akka namati utuu hin tanee akka sareeti iaalaa jiru. Azeb Mesfin amoo Melese Zenawi Biyya Italiati owaluuf yaalaa akka turtee keessa beektoon dubacha turan ergis booda war TPLF mariatan reefi isaa Adwat erga owalamee booda reefa artifshali keessa sanduqa keenya uumataa biyyati gowamsuu ni dandeenya jeechun murteefatan. Dhimmaa kana akka adda bafaneen gabasssa gutuu isaa dhiyeesuu yaala.
Boo'icha dirqiin Manasibu Keessati goochuuf yaalamee Uuumanii Oromoo TPLFn tufattee dhisee:
Melese july 15 /2012 du'ee gaafa 16july Ethiopia galee erga awalamee ture jira. Ethiopian ji'aa 2 gutuu reefan, bitama turtee amoo sanduqa keessa dhagga gutaan uumataa yassan biraa nanesesan boosisa jiru. Kun tufi Uumataa Ethiopia qabandha.
Guyya Hara Hagaya 27/2012 Uumani Manasibu Magala Mandi Irrati du'aa gai'' Melese Zenawi irrati dirqaman akka argaman goodhama jiru. Ittianan Bulchan Manasibu duran waran biyooleessa fudhatee ijoolee koo fi hadha mana koo durati erga na ajeessan booda malaqa mana jiruu ittianan Bulcha Manasibu akka malaqa dhufa isaati lakawatee fudhatee deeme, reefi koo akka hin awalamnee goodha. Kana hundafi nami iiti gafatamuu Melese Zenawi fi jalee TPLF, kan nama gadisisuu Melese Zenawi ji'aa 2 dura Belgium Brusselti du'ee ji'a 1 dura Aduwati awalamee, Saduqati dhagga naqani Oromoo yamuu bosisan heedu nama gadisisa, gaaf tokko dhuggan ni ba'aa. Adamuu Baqala Ganda Gunfii Manasibuu irra
http://www.youtube.com/watch?v=s_trSJf7Zec&feature=related Kim Il Sung death to comper with Melese Zenawi
N.B Suura fi jeecha isaan Fooda Gummi Paarlamaa irra suuraa isaan waliin dubsa? facebook gummi paarlamaa Oromoo irraa
Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved